2 Ndị Tesalonaịka 3 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Akwụkwọ Ozi Nke Abụọ E Degaara Ndị Tesalonaịka 3:1-18
Na-ekperenụ anyị ekpere (1-5)
A dọrọ aka ná ntị gbasara ndị na-akpa àgwà na-adịghị mma (6-15)
Ekele mmechi (16-18)
3 N’ikpeazụ, ụmụnna anyị, na-ekperenụ anyị ekpere+ ka okwu Jehova* na-agbasa n’ike n’ike+ ma bụrụ nke a na-anabata na nke e ji kpọrọ ihe otú unu na-eme 2 nakwa ka Chineke napụta anyị n’aka ndị ọjọọ na ndị obi fere azụ,+ n’ihi na ọ bụghị mmadụ niile nwere okwukwe.+ 3 Ma Onyenwe anyị na-emezu ihe o kwuru. Ọ ga-agba unu ume ma napụta unu n’aka ajọ onye ahụ. 4 Ebe ọ bụ na anyị na Onyenwe anyị dị n’otu, obi siri anyị ike na unu na-eme ihe anyị gwara unu nakwa na unu ga na-eme ya. 5 Ka Onyenwe anyị na-eduzi obi unu otú dị mma, ka unu wee hụ Chineke n’anya+ ma na-atachi obi+ n’ihi Kraịst. 6 Ụmụnna anyị, anyị na-agwa unu n’aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ka unu na-eze nwanna ọ bụla na-enupụ isi eze,+ bụ́ onye na-anaghị eso omenala* anyị kụziiri unu.*+ 7 N’ihi na unu ma otú unu ga-esi na-eme ka* anyị,+ n’ihi na anyị akpaghị àgwà na-adịghị mma mgbe anyị na unu nọ, 8 anyị erighịkwa nri onye ọ bụla n’efu.*+ Kama anyị gbara ezigbo mbọ ma rụsie ọrụ ike ehihie na abalị ka anyị ghara ibo onye ọ bụla n’ime unu ibu dị arọ.+ 9 Ọ bụghị na anyị enweghị ikike ime otú ahụ,+ kama anyị chọrọ ka unu mụta ihe n’aka anyị, ka unu wee na-eme ka* anyị.+ 10 N’eziokwu, mgbe anyị na unu nọ, anyị na-enye unu iwu, sị: “Onye ọ bụla na-achọghị ịrụ ọrụ, ya erila ihe.”+ 11 N’ihi na anyị na-anụ na e nwere ụfọdụ n’ime unu na-enupụ isi,+ ha anaghịkwa arụ ọrụ ọ bụla, kama ha na-etinye anya n’ihe na-agbasaghị ha.+ 12 Anyị na-enye ndị ahụ iwu, na-adụkwa ha ọdụ n’aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst ka ha medaa obi na-arụ ọrụ ma na-eri ihe hanwa rụtara.+ 13 Ma ununwa, ụmụnna anyị, ka ike ime ihe dị mma ghara ịgwụ unu. 14 Ma ọ bụrụ na e nwere onye na-achọghị irube isi n’ihe anyị kwuru n’akwụkwọ ozi a, hụwanụ onye ahụ ama, unu na ya kwụsịkwa ịkpa,+ ka ihere wee mee ya. 15 Ma unu ewerela ya ka onye iro, kama na-adụnụ ya ọdụ+ ka nwanna. 16 Ka Onyenwe anyị, onye na-enye udo,* mee ka udo dịrị unu mgbe niile n’ihe niile.+ Ka Onyenwe anyị nọnyere unu niile. 17 Mụnwa bụ́ Pọl na-ekele unu. Ọ bụ m ji aka m na-ede+ ekele a otú m na-eme n’akwụkwọ ozi ọ bụla ka ọ bụrụ ihe àmà; otú a ka m si ede ihe. 18 Ka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst meere unu niile amara.
^ O nwere ike ịbụ, “ha.”
^ Ma ọ bụ “na-eṅomi.”
^ Ma ọ bụ “n’akwụghị ụgwọ.”
^ Na Grik, “Onyenwe udo.”
2 Ndị Tesalonaịka 3
2 Ndị Tesalonaịka